Sida loo Encode DivX files leh DivX Encoder -
> Resource > Beddelaan > Sida loo Encode DivX files leh DivX Encoder
Waxaa jira DivX Certified® qalabka korontada qalabka aad u badan sida ciyaaryahan Blu-ray, TV, telefoonka gacanta iwm ee suuqa. Fursadda in aad rabto in aad encoder xirfadle DivX si loogu badalo aad video files in ay arki qalabka DivX aad. Si ka dhowaad qaab kasta oo video kale encode DivX, Wondershare Video Converter ( Video Converter u Mac ) waa gargaar aad u weyn.
The software si sahlan loo isticmaalo iyo wax ku ool ah waa inay awoodaan inay encode kasta video qaab DivX alaabooyinka DivX si fudud oo dhaqso. Sidaa daraadeed, waxa aad dareemi kartaa lacag la'aan ah inay ku raaxaystaan ​​wax video ama filim on qalab aad. Iyo tayada video durba waa sameecadda ah. Waxa kale oo weyn DivX qalab Deji ku siinayaa awood badan ku video ah &-beegyada uu audio. Waxaad sameyn kartaa xalka video, heerka jir iyo heerka yara iwm Habka hawlgalka oo dhan waa mid aad u fudud, kaliya qasabno yar.
Next, inaan qaato version Windows ee app this tusaale ahaan si uu idiin tuso tallaabooyinka faahfaahsan. Marka hore, sida ay nidaamka kombiyuutarka aad, dejisan iyo rakibi version saxda ah ee encoder DivX ah.
1 videos Add to encoder DivX ah
Jiid & jeedi video deegaanka files in this encoder DivX. Ka dib markii in, dhammaan videos lagu Murayaad this app ee dari karaa, ka muuqda shaxanka soo. Ama in dhinaca kore ee bidix ee interface hadda, si toos ah riix badhanka in browser aad disk adag oo soo dhoofsadaan, kuwaas oo warbaahinta faylasha aad rabto in aad encode.
In tallaabadaas, waxaad dooran kartaa DivX sida qaab wax soo saarka aad u fudud. First of dhan, arbushin ilaa qaab saarka daaqadan app ee furitaanka liiska dropdown ee guddiga Qaabka Output dhinaca midig. Daaqadda pop-up ka, waxaad ka arki kartaa ku dhowaad dhammaan qaabab ay ka mid yihiin audio, videos iyo qalabka. Hadda, kaliya u tag "Qaabka" category iyo dooran "DivX" qaab ka "Video" subcategory.
Fiiro gaar ah: Haddii aad rabto in aad la qabsato oo xuduudaheedu Deji qaar ka mid ah keligaa, sida xal video, heerka jir video, video & heerka yara audio iwm, riix "Settings" ikhtiyaarka hoose ee guddiga Qaabka Output iyo dooro beegyada aad rabto ee soo socda uu furmo suuqa Dejinta. Ugu dambeyntii, guji "OK" si loo badbaadiyo goobaha.
3 files Encode DivX
Markii wax walba la dhammeeyo, kaliya wax miiran "Beddelaan" rukun ee hoose ee midigta ah interface ugu weyn DivX encoder ee ay u bilaabaan Deji files DivX ka kale kale video files. app Tani waxay ku dhamaysan karaan dhamaan shaqooyinka diinta degdeg ultrafast iyo wax soo saarka oo tayo sare ah. Markii geeddi-Deji la sameeyo, ka tago si hoose ee software ee "Beddelaan" interface iyo riix "Folder Open" button waxaa si aad u ogaato wax soo saarka files DivX.
Hadda, dareemaan kaliya oo lacag la'aan ah si ay u raaxaystaan, kuwaas oo files DivX encoded on qalabka DivX ama isticmaalaan ka buuxsada iyaga, waayo, iyagu waxyaalahaas oo kale. By jidkii, actuallly, faylasha DivX waa kuwa la kordhiyo .avi.